Saripika · Avrily, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Saripika · Avrily, 2016
Tantara mikasika ny Saripika tamin'ny Avrily, 2016
Azia Atsimo 21 Avrily 2016
Sary Avy Amin'ny Media Sosialy Mampiseho ny Loza Vokatry Ny Horohorontany Matanjaka tao Kumamoto, Japana
Azia Atsinanana 19 Avrily 2016
"Niaina tanatin'ny alina sarotra izahay satria nitohy ny horohorontany tao amin'ny tànanan'i Kumamoto."
Azia Atsinanana 16 Avrily 2016
"Trano mijoalajoala manaka-danintra no mamefy ilay tanàna, izay toa alan-tsimenitra... Nefa raha manokana fotoana ianareo hamantarana ilay tanàna, dia tena faran'izay akaiky kely ny hakanto natoralin'ny tontolony."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Avrily 2016
Azia Atsinanana 04 Avrily 2016
Velona indray i Japan amin'ny faran'ny volana marsa sy ny avrily amin'ny fotoana mamelana mahafinaritra ny serizy. Indro sy angon-tsary mahafinaritra hita ao amin'ny Instagram amin'ity fotoana mahafinaritra ao anatin'ny taona ity.
Afrika Mainty 03 Avrily 2016
Resaka nifanaovana tamin'ny mpanakanto maoderna iray sady miaina kolontsaina marolafy